RaceandHistory.com : Zimbabwe: 'MDC-T lies to discredit polls'
Zimbabwe: 'MDC-T lies to discredit polls'
President Mugabe's sentiments on MDC-T came as some wire reports suggested that the opposition party was developing jelly feet and contemplating pulling out of the race claiming the "electoral playing field is uneven", the usual cry that the opposition makes each time it stares defeat in the face or actually loses an electoral contest.
"Ndafamba maprovinces akawanda and where there have been incidents of violence, arson or destruction yemusha hapana yakaitwa nemaforces edu," Cde Mugabe said.
"I was in Matabeleland North yesterday, it's all very peaceful. I was in Matabeleland South, a day before yesterday and it's also peaceful except for a (recent) incident in the northern part of Gwanda where the MDC destroyed an office, a sub-office yedu. Here in Bulawayo. Khonapha ko Bulawayo, there is absolute peace. People are campaigning, yes but we are campaigning in peace. So on 27 June let us go in peace tinoita cast vote, a historic vote. We dare not make a mistake. Don't vote against yourself. Siyekele ukuzibulala," the President said.
He said lives were lost for the liberation of this country and therefore Zimbabwe's independence and sovereignty should be held dearly by all its inhabitants.
"Nezuro kuNkayi North, ndakaratidzwa nzvimbo pakamira Baba weZimbabwe, Umdala Wethu, achitambira magamba adzoka tapedza hondo kuZambia," said Cde Mugabe.
"Saka tavakuenda musi wa27 next week tinosungirwa kuenda tichifunga nhoroondo iyoyo. Kufunga vakafa, vakava zvirema kuhondo. Kufunga anaLobengula, hatizivi kwaakazofira, anaMashayamombe. Hondo yavakatanga ivavo yakatipa moyo wokubvisa mabhunu. Hatidi kuti tidzokorodze imwe hondo yokubvisa mabhunu zvakare nokuti matadza kuvhota. Mawar veterans arikuti kwete. Silabo lapha. Lo uchairman weprovince (Cde Macleod Tshawe) ngomunye wabo."
He reiterated that the war veterans had vowed to put up a fight against recolonisation embodied in the existence of MDC on Zimbabwe's political landscape.
"The ballpoint pen must not defeat the gun. Zvanzi hatidi kuona ballpoint pen ichinzi yakunda," said the President drawing applause from the crowd.
"Vari kuti ivo ballpoint ngaitevere nzira yomubhobho. Ukada kuita nharo mubhobho versus ballpoint, hazvife zvakaitika."
He said Government had programmes such as people's shops where affordable basic commodities could be bought as well as people's buses among others, meant to mitigate the effects of the sanctions that were imposed on Zimbabwe over the land reform programme – which was the source of the standoff between Harare and London.
Cde Mugabe implored the people of Bulawayo to join the rest of the country in defending Zimbabwe's independence and emphasise the City of Kings's place as the second largest in the country by voting resoundingly for Zanu-PF.
"Tibude tose. Vote yomuno muBulawayo iri vote of the capital city."
Dr Ndlovu, who is the Minister of Information and Publicity, said the constituency which he was contesting in had a pride of place as it had been once held by some of the nation's founding fathers – the late Vice President Dr Joshua Nkomo and Vice President Joseph Msika.
"Mhlaka 27 uPresident Mugabe ewofisini, uDr Ndlovu Ephalamende," said Dr Ndlovu to thunderous applause.
MDC-T party 'split' over poll
MDC-T Democratic Resistance Committees behind violence
"I wish to put the record straight on the political violence in Zimbabwe. It is without doubt that between the two political parties, MDC-T and Zanu PF, MDC-T is the main culprit in the political violence that we are currently witnessing in the country," Comm-Gen Chihuri told journalists.